ဦးဂင်ကြီး: ၁/၄၄ မှတ်တမ်း
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 1:03 AM
စူး, September 7, 2009 at 2:10 AM
very good life poem.
Nge Naing, September 7, 2009 at 3:09 AM
ဦးဂင်ကြီးရေ ဒီကဗျာကို ရင်ထဲက တကယ်ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲလာခံစားသွားတယ်။ ကျွန်မတို့ ကိုးတန်းနှစ်မှာ ငွေစက္ကအရေးအခင်း ရန်ကုန်မှာ ဖြစ်ပြီး ကျောင်းပိတ်လိုက်တော့ ဟိုတုန်းကလည်း ဦးသန့်အရေးအခင်းဆိုတာ ရန်ကုန်မှာ ဖြစ်ခဲ့ဖူးလို့ အခုလိုကျောင်းပိတ်ဖူးတယ် ပြောလို့ စပြီးကြားဖူးတယ်။ ၈၈ မတိုင်ခင်က မြန်မာလူမျိးအချင်းချင်း ဆန္ဒပြတဲ့ အရေးအခင်းဆိုလို့ ဒီနှစ်ခုပဲ ကျွန်မကြားဖူးပါတယ်။ ၈၈ ရောက်မှ အကုန်လုံး ပွင့်သွားတာ။
အောင်သာငယ်, September 7, 2009 at 4:32 AM
မိုးသွေးငယ်, September 7, 2009 at 5:05 AM
လာခံစားတယ် အကိုရေ..။ဘဝ တစိတ် တဒေသ ကို ဖော်ပြနေတဲ့ ကဗျာကောင်းလေး တပုဒ်ပါပဲဗျာ။ တော်တယ်ဗျာ။
အားလုံးကို ပျော်စေချင်တဲ့ -
မြူးသျှရီ, September 7, 2009 at 6:51 AM
ကဗျာကို တခါမှနားမလည် ခဲ့ဖူး
ခက်ခက်လေးတွေ ရေးကြလို့ 
အဖြစ်ချင်းကလဲ နည်းနည်းတူလို့ လေ
ခြေလှမ်းသစ်, September 7, 2009 at 8:32 AM
ကိုဂင်ကြီးရေ ဒီလိုကဗျာလေးတွေကို ဖတ်ရတာ အရမ်း ကြိုက်တယ်ဗျာ ... လိုရင်းအဓိပါယ်ကိုလဲရတယ် .. ကဗျာထဲမှာလဲ နစ်ဝင်သွားတယ်ဗျာ ...
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ), September 7, 2009 at 10:29 AM
ကဗျာလာဖတ်သွားတယ် အကိုကြီး၊ မွေးနေ့ဆိုရင်
happy birthday! ဗျာ၊ ကဗျာက ကောင်းတယ်
ယွန်းလေး, September 7, 2009 at 2:36 PM
မဆုမွန်, September 8, 2009 at 4:47 AM
ဒီကဗျာလေးကို ဖတ်ပြီး အဖေ့ကို သတိရသွားတယ်..
မမသီရိ, September 8, 2009 at 6:02 PM
မွေးနေ့ဆိုရင် Happy Birthday ပါနော်
ချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့ သေတပန်သက်တဆုံး မခွဲမခွာ စိတ်လက်ချမ်းသာ နေရပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
တောင်ပေါ်သား, September 11, 2009 at 9:11 PM
ဦးဂင်ကြီးရေ ကဗျာလေးကို ခံစားရတယ် ဘ၀ပါပဲ.. ဘယ်လိုပဲ ဖြတ်သန်းဖြတ်သန်း ပြည်သူတွေအတွက် ၊ မိသားစုအတွက် စိတ်ထဲ ရှိနေတယ်ဆိုရင် ဂုဏ်ယူနေရစမြဲပါ
SDL, September 12, 2009 at 4:36 AM
I love this poem .